पूर्वाग्रहको धेरै स्मार्ट मान्छे पनि विषय हो। र त्यहाँ गलतफहमियहरुलाई, र खाना पकाउने छन्। मासु कठिन र nesochnoe - उदाहरणका लागि, अधिकांश मानिसहरू कि बीफ लाग्छ। हास्य रूपमा, बिरालोहरु बारेमा भन्दै "तपाईं कसरी खाना पकाउनु थाह छैन।" बियर सस मा नै मासु - vkusnota indescribable, मासु कोमल र हर एक ठाँउ पोर्क भन्दा छिटो प्रयोग पनि capricious गर्दछ। व्यञ्जनहरु "सफ्नर" भर्खर बियर कार्य कि प्रदान गर्न इच्छुक धेरै देशहरूको भोजन। र मासु छोराछोरीलाई मेनु लागि "पिएको", अनुपयुक्त हुनेछ चिन्ता छैन। कि रक्सी को Boiling पानी तल तापमान मा decomposed छ सम्झना। ताकि गर्मी उपचार सन्तानहरू को स्वास्थ्य गर्न केही खतरनाक हुँदा रहनेछ।
मासु को एक किलो लिन र मध्यम आकारको टुक्रा मा कटौती। तिनीहरूलाई prisolit र spiced छन्, पीठो हुनु पर्छ मा breaded - तर तलना छैन! तुरुन्त coarsely कटा आलु को एक पाउन्ड ठूलो बल्ब थप्न (यो सानो छ भने, यो सारा tubers राख्नु गर्न सम्भव छ), लौंग (को छैन घन्टी), र लसुन को छ लौंग रेकर्ड। यो सबै tolstodonnoy पैन भरिएको polstakana बाक्लो टमाटर शोरबा र अपूर्ण पोर्टर बोतल को 400 एमएल संग पतला पेस्ट मा मिश्रित छ। बरु, यो कुनै पनि लाग्न सक्छ गाढा बियर, स्वाद मखमली थियो कि मुख्य कुरा। सबै एक फोडा गर्न आउँदा, ज्वाला, एक ढक्कन र घण्टा एक जोडी संग शिथिल ढाकिएको कन्टेनर, को मासु पकाएको सम्म स्क्रूड, एक्लै छोड्नुहोस्। अन्तमा स्थिर मटर को आधा कप पोख्नुहोस् - र पाँच मिनेट पछि एक साँचो आइरिस व्यञ्जन आनन्द उठाउन सक्छौं। सबै manipulations (र पोर्टर पहिलो स्थानमा) धन्यवाद बियर सस मा नरम र रसदार मासु गर्दछ। Vkusnota indescribable! हो, तपाईं धेरै लामो र गाह्रो छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ र, तयारी।
यसलाई आठ सय ग्राम को मात्रा मा मात्र होइन मासु, तर पनि बेकन टुक्रा आवश्यक हुनेछ - 100-150 Salò, धेरै सूक्ष्मता कटौती गर्नुपर्छ हुन प्याज को आधा किलो - polukolechkami र बीफ -। किनारा संग Cubes3सेमी बेकन जैतून मा भुना (पाठ्यक्रम!) यो बोसो संग राम्ररी गरम गर्न मध्यम गर्मी मा तेल। Greaves हटाइएका छन् र एक frying मा राखे प्याज प्यान। यो browned हुन्छ, चिनी र caramelized प्याज धर्काहरू एक चम्मच थप्नुहोस्। एउटै पैन, कुन साथ हटाइयो तेल मा तला प्याज, (यो समय एक मलाईदार) पीठो बीफ स्लाइस मा breaded। बन्द खैरो - स्थगित र सिरका दुई चमचा संग गाढा बियर को पट pint मा खन्याउन। एक ओवन पकवान मा तहहरू प्याज, बेकन र मासु राखे। को उसिनेर सस सम्म प्रतीक्षा थप्ने मरिच, बे, thyme र नुन - सबै अनुसार आफ्नो स्वाद छ। परिणामस्वरूप सस पाक पकवान हालिएको छ; कटा रोटी एक पक्ष मसालेदार तोरी मा गंदा र मासु भन्दा विस्तार। सारा संरचना माथि पन्नी मा र्याप र दुई घन्टा को लागि ओवन पठाइएको छ। निस्कनुहोस् मा - कोमल र बियर सस मा flavorful बीफ; vkusnota indescribable - रस मा भिगो विशेष गरी रोटी। र मासु कुनै एक प्रशंसा गर्न dares छैन।
तपाईं अतिरिक्त सामाग्री को धेरै बिना गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त मा, एक व्यक्ति कुनै पनि विशेष पक्ष पकवान चयन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले किन यो सीमित? तपाईं बस (उल्लेख गरिएको छ रूपमा, vkusnota indescribable) एक सफल बीफ बियर सस मा आउन बाहिर राख्नु समेत। मासु बर्क समान घन को एक पाउन्ड र पैन जान; सुरु Browning - दुई आधा छल्ले lukovok, नुन र कटा लसुन (लौंग कम्तिमा पाँच थप सम्भव) थप्नुहोस्। अग्रिम हत्येदार बरतन मा मिनेट को एक जोडी zakipyachennoe बियर (आधा लिटर), मीठो मरिच topped र lavrushku वरिपरि बार लाउनु पछि। मासु अन्य सबै प्रकारका मासु स्ट्यु लामो समय हुनेछ देखि मात्र फरक - एक र आधा घण्टा। र त्यसपछि: बोन होस्!
बियर मा सुगन्धित बीफ
यस नुस्खा मासु एक टुक्रा तयार लागि डिजाइन गरिएको छ, तर कटा लागि यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मासु एक पाउन्ड shredded प्याज, भोजन तोरी चम्मच, नुन र मरिच को एक मिश्रण सबै पक्षलाई rubbed। एक बाक्लो टुक्रा फ्रिज मा आधा एक घण्टा promarinuetsya, त्यो चाँडै खैरो, को पट मा, सारे गाढा बलियो बियर को एक बोतल खन्याइन् र कागति zest र जीरा संग स्वादिष्ट। महत्त्वपूर्ण subtlety: यो चरण मा र राई रोटी crusts केही थपियो (सुक्खा हुन सक्छ)। को पाठ्यक्रम, तपाईंले चाहनुहुन्छ भने स्पष्ट तपाईंको असफल बीफ स्ट्यु बियर मा। नुस्खा सुनिश्चित मासु वाहेक संग थप सुगन्धित र नरम हुनेछ भनेर। पैन उम्लिरहेको पछि ढाकिएको र बीफ कोमल सम्म गर्मी गर्न बाँकी छ।
गोरुको मासु खुर्सानी
उनको पहिलो लागि समग्र लाउने छ। यसको लागि चार मिनेट लामो र आधा पोलेको जीरा र एक - धनिया। अत्तरहरु cooled छन्, तिनीहरू खुर्सानी मसला को सात चमचा, आफ्नै रस मा कटा टमाटर को आधा किलो, सिमी र गाढा बियर बोतल को 850 G मा बैंक थपिएका छन्। सबै घटक दस मिनेट निभाउँछ छन्। यो समयमा, भोल्युम पैन बीफ स्लाइस2पाउण्ड तला र rapeseed तेल मा एक अलग पैन मा - shredded प्याज2को एक किलो jalapenos , र पहेंलो र रातो घंटी मरिच (स्ट्रिप्स) को एक पाउन्ड। सबै घटक मिश्रित गर्दै छन्, र गाढा बियर मा बीफ खट्टा क्रीम, chives छल्ले पंख र frayed पनीर संग सेवा छ। स्वादिष्ट र garnish गर्न आवश्यक छैन!
एक पट मा गाढा बियर संग बीफ
मासु को rigidity जोगिन गर्न, कटा बीफ को पहिलो पाउन्ड, एक cauldron वा पैन मा भुना एक कटा गाजर, नुन, मसला र गाढा बियर को एक बोतल संग दस मिनेट निभाउँछ। छैन अन्त सम्म: ओवन मा बियर मा मन बीफ आउन, माथि आलु को एक पट राख्नु र पूरक (200 ग्राम, अधिक)। र ओवन मा - को semifinished मासु यस ह्यान्डी पट विस्तार, माथि मध्यम कटा tubers ढाकिएको छ, tushilos जसमा लेदो पोखे। कसले मेयोनेज को बर्तन सामग्रीहरू खन्याउन र पनीर संग छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ। तत्परता को स्वाद द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन। बदगुमान लागि - एक काँटा मासु मा फँस। यदि नरम - गंध हतारिएको नगर्ने ती को तालिका मलाई कल।
गोरुको मासु + बियर + छाँट्दछ
यो पनि एक "potting" नुस्खा छ। मासु एक पाउन्ड फेरि सानो टुक्रा तला छ। अलग zazharki दुई प्याज कटा र लसुन लौंग (प्लेट) गरेको। Frayed वा आधा घण्टामा तीन टमाटर peremelennye तला evaporated र5छाँट्दछ सूक्ष्मता कटा। सारा छाँट्दछ - कटा छाँट्दछ, शीर्ष - - पहिलो पट मा प्याज राख्नु छ मासु, र अन्त मा। बियर, kneaded को आधा बोतल संग टमाटर संग तला जडान, र एक सानो सस प्रत्येक पट मा हालिएको। वितरण यसरी छाँट्दछ संग बीफ बियर मा एक घण्टा र एक चौथाई लागि ओवन मा राख्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ, परिणाम प्रयास लायक छ।
संग सुकेको फल मासु भरी
तपाईं लागू गर्न सक्नुहुन्छ र थप रोचक विकल्प, जो बियर मा छाँट्दछ संग बीफ पकाएको गर्न सकिन्छ। पहिले, को लास को एक ठूलो टुक्रा यो सुखा छ जो पछि सुकेको निवेश छन् जसमा pockets, केही प्रकारको कटौती गर्न सकिन्छ - सिर्फ एक पाक पानामा वा पन्नी मा र्याप। तपाईं छाँट्दछ संग पोर्क एक प्रकारको प्राप्त। एक ठूलो टुक्रा वा कटा - दोश्रो, यो मासु बन्द पिटे गर्न सम्भव छ। को जोडी सुकेको फल र मासु रोल्ड रोल को बीचमा। सानो "sausages" पर्याप्त ठूलो खाली फेरि अझै सुखा तलना गर्न। तर, यस्तो योजना आकर्षक फिट मात्र बीफ बियर मा marinated को कार्यान्वयन को लागि, यो मनमोहक छ - अन्धकारमा। मासु एक टुक्रा छ भने - मसला र स्नान तपाईं मासुको चोक्टा प्रयोग गर्नुहोस्, र राती भने एक frothy पेय मा एक घण्टा, स्पाइस यसलाई Suffice। सफल प्रयोग!
मशरूम कसरी अचार गर्न? सही नुस्खा
Multivarka मा बिस्कुट "रेडमन्ड।" Multivarki रेडमन्ड लागि व्यञ्जनहरु
सबै अवस्थित व्यञ्जनहरु द्वारा पूछे जाने भरी। द्वारा पूछे जाने रोटी पनीर र जडीबुटी संग। द्वारा पूछे जाने रोटी माछा र पनीर संग
पिज्जा। कसरी घर मा चाँडै स्वादिष्ट खाना पकाउन र
कसरी दूध संग अनाज porridge खाना पकाउनु: केही विस्तृत व्यञ्जनहरु
खुवाउने सुरु गर्नुहोस्। जवान आमा को लागि सुझाव र सल्लाह
Router Zyxel Keenetic Omni: setting। Zyxel Keenetic Omni: मोडेम सेटअप
25 वर्ष केटी लागि केक, किन्न वा आफ्नो हात बनाउन?
मात्र 1 घण्टा र निद्रामा कमी एक वाहन दुर्घटना को जोखिम युगल
बच्चाहरु को लागि व्यापक विकास गतिविधिहरु2वर्ष
लागि मानिसहरू "Sealeks गुण" खाद्य पूरक: प्रयोगको लागि निर्देशन
Tuberculin परीक्षण: मान, विधि र परिणाम व्याख्या